Nkọwapụta --lọ ọrụ - HEBEI ORIENT Bubata & Mbupụ CO., LTD
Usoro Nchedo Ahụike
Incontinence Sanitary Nlekọta Usoro
Ngwa ahịa ọgwụ
Mkpịsị aka n'ọnụ oxymeter
Ọbara nyocha ọbara
Mbara glucose ọbara
Ule ime nwa
Ọrụ ụlọ usoro
Usoro nyocha nke ụmụ nwanyị
Video & Ndụ
ORIENTMED hiwere na 1991. Anyị bụ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ tumadi na-etinye ọgwụ na ngwaahịa. Dabere na ogo magburu onwe ya na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, anyị emeriela aha ọma n'ọtụtụ ógbè dị iche iche, dịka Germany, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, United States na na.
All nke anyị na-e mma na asambodo nke OA, ISO, FDA karị.
Ngwaahịa anyị gụnyere gụnyere ndị a:
Sirinji mkpofu: Sirinji emere, agịga hypodermic, infusion set, skin vein set, IV cannula, lancet blood, scalpel, tube collection blood, akpa ọbara, akpa mmamịrị.
Ngwongwo nwere ike iwepu: dị ka ogwe aka latex, nitrile gloves, vinyl gloves na PE gloves.
Disposable na-abụghị kpara ngwaahịa: dị ka nkpuchi ihu, mkpuchi akpụkpọ ụkwụ, okpu ndị mmadụ, Bouffant caps, dọkịta na-awa ahụ, uwe, drape, akwa akwa, n'okpuru mpempe akwụkwọ, aka uwe wdg.
Uwe ọgwụ: gụnyere bandages na-agbanwe agbanwe, bandeeji cohesive, Pee, non-kpara na zinc oxide teepu, plasta ọnya, plasta wdg.
Ọgwụgwọ ọgwụgwọ na-enye: dị ka oche oche oche eletrik, oche oche oche nke aluminium, oche oche oche, na-ebugharị oche nkwagharị, na-ebugharị, na-aga, ụgbọ mmiri na osisi wdg.
Ihe nyocha ule: dị ka ule afọime, nyocha ovulation, HIV, HAV, HCV, Malaria, H-pylori, wdg.
Eze kit: gụnyere sirinji eze, igwe mbuli mmiri, ihe mkpịsịcha abụọ gwụrụ, nyocha eze abụọ, stomatoscope wdg.
Ọrịa ụmụ nwanyị: dị ka mmamiri ntule, swab, urinary swab, cervix ahịhịa plush, cervical ngaji, cervical rambrush, endometrial mmiri curette, cervical spatula, osisi spatula, gynecological ngwa iwu.
Ngwa ahịa ọgwụ: dị ka nlele ọbara mgbali, Glucose meter, ọkpọiso na Digital thermoeter, Fingertip oxymeter, Automatic ncha dispenser.
Anyị na-elekwasị anya na usoro dị elu na mmepụta nke ngwaahịa anyị kemgbe mmalite nke ịmekọrịta mmekọrịta azụmahịa na ndị ahịa anyị n'ụwa. Anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma iji mee ka ọrụ anyị ka mma ma anyị na-atụ anya ịmekọrịta mmekọrịta a pụrụ ịdabere na ya na ndị ahịa ndị ọzọ n'ahịrị nke ngwaahịa ọgwụ ndị nwere ike ịchụpụ n'ọdịnihu dị nso.
Aghọ ndị magburu onwe enterprise na niile ahịa tụkwasịrị obi na mkpara n'anya!
Inyere ndị ọrụ aka na-eto eto ma na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta amamiihe!
Omume: ahụike, ntụkwasị obi nke onwe, ịkwụwa aka ọtọ, ịkekọrịta, inwe ekele! Ọgụ: ọrụ, arụmọrụ, otu, agụụ, na mmeri!
HEBEI Isi Bubata & Mbupụ CO., LTD
Ekwentị: 0086 13315125256
Gbado anya na WeChat
Akụkọ banyere uwe ọgwụ nwere ike iwepu
1. Akụkọ banyere mmalite nke gloves nwere ike iwepu n’afọ 1889, akpa amụrụ ụzọ eji emefu mkpofu amụrụ n’ụlọọgwụ nke Dr. William Stewart Halstead. N'ime usoro ịwa ahụ, gloves ndị nwere ike iwepu nwere ike ọ bụghị naanị na ị hụ ngbanwe nke aka dọkịta, kamakwa mee ka ahụike nke gburugburu ahụike dị ọcha. Uwe a na-ekpofu ekpofu na dọkịta na-awa ahụ n'ìgwè a na-ewu ewu. N'ime ule ọgwụ na-adị ogologo oge, a chọpụtakwara uwe aka nwere ike ịnweta ...
otu esi eji eriri lancet
Etu esi eji eriri ọbara ọbara? Ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-etinyekwu uche na ahụ ike ha ma na-aga na Medicallọ Ọrụ Ahụike iji nye ahụike ha maka nyocha zuru ezu. N'ihi nke a, mkpa ọgbụgba ọbara dị ugboro atọ karịa ka ọ dịbu. Otu esi eji eriri lancet eme ihe ghọrọ ihe dị oke mkpa. Otu esi eji lacet ọbara wee dịwanye mkpa. Ugbu a ka anyị mụta otu esi eji ụdị akuko ọbara. Etu esi eji Press Lancet Nzọụkwụ 1 Wepu ihe nchebe ...
Nwanyị Harper Han